Leviticus 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Afɔrebɔ ahorow ho akwankyerɛ (1-21)
Afodi afɔre (1-10)
Asomdwoe afɔre (11-21)
Ɛnsɛ sɛ wodi srade anaa mogya (22-27)
Asɔfo no kyɛfa (28-36)
Afɔre ahorow no ho nsɛm a etwa to (37, 38)
7 “‘Afodi afɔre no ho mmara ni:+ Ɛyɛ ade kronkron paa. 2 Baabi a wokum aboa a wɔde bɔ ɔhyew afɔre no, ɛhɔ ara na wobekum aboa a wɔde no bɛbɔ afodi afɔre no, na wɔde ne mogya+ bɛpete afɔremuka no so ahyia.+ 3 Ma ɔsɔfo no* nyi ne srade nyinaa,+ ne dua a adɔ srade no, ne ne nsono ho srade, 4 ne asaabo abien no ne ɛho srade a ɛbɛn n’asen no. Onyi mmerɛbo no ho srade nka asaabo no ho.+ 5 Ma ɔsɔfo no nhyew wɔ afɔremuka no so sɛ afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa.+ Ɛyɛ afodi afɔre. 6 Mmarima a wɔyɛ asɔfo no nyinaa tumi we bi.+ Ɛsɛ sɛ wɔwe wɔ baabi a ɛhɔ yɛ kronkron. Ɛyɛ ade kronkron paa.+ 7 Afodi afɔre no, ɛho mmara te sɛ bɔne ho afɔre de no. Ɛyɛ ɔsɔfo a ɔbɛbɔ afɔre de apata bɔne no dea.+ 8 “‘Sɛ obi de aboa brɛ ɔsɔfo no sɛ ɔmfa mmɔ ɔhyew afɔre a, aboa no nhoma+ bɛyɛ ɔsɔfo no dea. 9 “‘Aduan biara a wɔbɛtõ wɔ fononoo mu anaa wɔbɛkyew wɔ ɔsɛn mu anaa wɔbɛtõ wɔ apampaa so+ de abɔ afɔre no, ɛbɛyɛ ɔsɔfo a ɔbɔɔ afɔre no kyɛfa; ɛyɛ ne dea.+ 10 Nanso sɛ wɔde esiam a wɔde ngo afra+ anaa nea hwee mfra mu+ ba sɛ wɔmfa mmɔ aduan afɔre a, ɛbɛyɛ Aaron mma no dea; wɔbɛkyɛ no pɛ. 11 “‘Afei sɛ obi de biribi rebɛbɔ asomdwoe afɔre ama Yehowa a, ɛho mmara ni:+ 12 Sɛ ɔde rebɛda ase a,+ ɔmfa ngo mfɔtɔw esiam nyɛ paanoo a mmɔkaw* nnim a ɛte sɛ kawa, na ɔnyɛ paanoo ntraantraa a mmɔkaw nnim mfa ngo nsra ho. Afei ɔmfa ngo mfra esiam muhumuhu mfɔtɔw no yiye mfa nyɛ paanoo a ɛte sɛ kawa. Ɔmfa eyinom nka n’aseda afɔre no ho. 13 Ɔmfa paanoo a mmɔkaw wom a ɛte sɛ kawa nka n’afɔrebɔde no ne nea ɔde rebɛbɔ asomdwoe afɔre no ho mmra sɛ aseda afɔre. 14 Ɔde emu biara bi bɛma Yehowa sɛ afɔrebɔde kronkron. Ɛbɛyɛ ɔsɔfo a ɔde asomdwoe afɔrebɔde no mogya bɛpete afɔremuka no so no dea.+ 15 Ɛda a ɔbɛbɔ asomdwoe afɔre a wɔde yɛ aseda afɔre no, saa da no ara na ɛsɛ sɛ ɔwe ɛho nam no. Ɛnsɛ sɛ ogyaw bi ma ade kye so.+ 16 “‘Sɛ bɔhyɛ afɔre+ anaa ayamye afɔre+ na ɔde aboa no rebɛbɔ a, ma ɔnwe no da a ɔde no bɛbɔ afɔre no, na sɛ ebi ka ma ade kye so a, ɛno nso obetumi awe. 17 Nanso sɛ edi nnansa na nam no bi da so wɔ hɔ a, wɔmfa ogya nhyew.+ 18 Sɛ ɛba sɛ aboa a wɔde bɔɔ asomdwoe afɔre no nam no bi ka ma edi nnansa na obi we a, nea ɔde bae no rennya nhyira biara; wabrɛ agu. Ɛyɛ atantanne, na obiara* a ɔbɛwe bi no benya ne bɔne so akatua.+ 19 Sɛ nam ka biribi a ɛho ntew a, ɛnsɛ sɛ obiara we. Wɔmfa ogya nhyew. Ɛnam a ɛho tew de, obiara a ne ho tew betumi awe bi. 20 “‘Aboa a wɔde bɔ asomdwoe afɔre ma Yehowa no, sɛ obi* a ne ho agu fĩ we ne nam no bi a, wonkum saa onipa no.*+ 21 Sɛ obi* ho ka biribi a ɛho ntew, te sɛ onipa a ne ho ntew,+ aboa a ne ho ntew,+ anaa biribiara a ɛho ntew a ɛyɛ akyiwade,+ na sɛ ɔwe aboa a wɔde rebɔ asomdwoe afɔre ama Yehowa no nam no bi a, wonkum saa onipa no.’”* 22 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 23 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Munnni nantwi anaa oguan ba anaa apɔnkye srade+ biara. 24 Sɛ mokɔto sɛ aboa bi awu anaasɛ aboa foforo akum no a, mubetumi de ne srade ayɛ biribiara a mopɛ, nanso monhwɛ na moanni bi da.+ 25 Sɛ obi de aboa reba ama wɔde ogya ahyew abɔ afɔre ama Yehowa, na sɛ odi ne srade a, wonkum saa onipa no.* 26 “‘Baabiara a mobɛtena no, munnni mogya+ biara. Munnni anomaa anaa aboa foforo biara mogya. 27 Obiara* a obedi mogya no, wonkum saa onipa no.’”*+ 28 Yehowa san ka kyerɛɛ Mose sɛ: 29 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Obiara a ɔbɛbɔ asomdwoe afɔre ama Yehowa no, ɔmfa n’asomdwoe afɔrebɔde no bi mma Yehowa.+ 30 Ma ɔno ankasa mfa srade+ no nka aboa no koko ho mmɛbɔ afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa. Ɔmfa nka aboa no koko ho na onhim no sɛ ohim afɔre+ wɔ Yehowa anim. 31 Ma ɔsɔfo no nhyew srade no wɔ afɔremuka no so.+ Aboa no koko no de, ɛbɛyɛ Aaron ne ne mma dea.+ 32 “‘Momfa aboa a mode bɛbɔ asomdwoe afɔre no nan nifa a ɛwɔ akyi no mma ɔsɔfo no sɛ afɔrebɔde kronkron.+ 33 Aaron mma no mu nea ɔde asomdwoe afɔrebɔde no mogya ne ne srade bɛbɔ afɔre no, ɔno na aboa no nan nifa no bɛyɛ ne kyɛfa.+ 34 Sɛ Israelfo no bɔ asomdwoe afɔre a, megye aboa no koko a wohim no ne ne nan a ɛyɛ afɔrebɔde kronkron no ama ɔsɔfo Aaron ne ne mma. Ɛyɛ ahyɛde a ɛbɛtena hɔ daa ama Israelfo.+ 35 “‘Ɛda a wɔde Aaron ne ne mma bae sɛ wɔmmɛyɛ Yehowa asɔfo no,+ eyi na woyi fii afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa no mu sɛ ɛnyɛ wɔn kyɛfa. 36 Ɛda a woyii wɔn fii Israelfo mu sraa wɔn ngo+ no, eyi na Yehowa hyɛɛ mmara sɛ wɔmfa mma wɔn sɛ wɔn kyɛfa. Ɛyɛ ahyɛde a wobedi so daa wɔ wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu.’” 37 Eyi ne afɔre a edidi so yi ho mmara: ɔhyew afɔre,+ aduan afɔre,+ bɔne ho afɔre,+ afodi afɔre,+ afɔre a wɔbɔ de hyɛ obi sɔfo,+ ne asomdwoe afɔre.+ 38 Eyi ne ahyɛde a Yehowa de maa Mose wɔ Sinai Bepɔw so,+ ɛda a ɔkae sɛ Israelfo mfa wɔn afɔrebɔde mmrɛ Yehowa wɔ Sinai sare so no.+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nea ɔrebɛbɔ afɔre no.”
^ Anaa “wontwa saa ɔkra no mfi ne nkurɔfo mu nkyene.”
^ Anaa “wontwa saa onipa no mfi ne nkurɔfo mu nkyene.”